Umhlahlandlela Wokuthola Kalula Izixhumanisi Ezingemuva Nezinga Ku-Google Usebenzisa i-AI | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 28, 2022 NgoMsombuluko, Februwari 28, 2022 Vaibhav Namburi
Izixhumanisi ezingemuva zenzeka lapho isayithi elilodwa lixhuma kwenye iwebhusayithi. Kuphinde kubizwe ngokuthi izixhumanisi ezingenayo noma izixhumanisi ezingenayo ezixhuma nesayithi langaphandle. Uma ibhizinisi lakho lithola ama-backlink engeziwe kuwebhusayithi yakho kusuka kumasayithi agunyaziwe, kuzoba nomthelela omuhle kakhulu kumazinga akho. Ama-backlink abalulekile ekwenziweni kahle kosesho (SEO) isu.
The landela izixhumanisi shayela igunya lenjini yokusesha… kwesinye isikhathi kwaziwa ngokuthi ukuxuba ijusi nokusiza ekukhuphuleni izinga lesayithi lokuxhumanisa. Kuyasiza ukubeka phezulu emakhasini emiphumela yenjini yokusesha (serp) kanye akukho okulandelayo izixhumanisi musa. Nakhu ukuthi umaka we-HTML wesixhumanisi esingalandeli ubonakala kanjani:
Le thegi yokungalandeli ikhombisa izinjini zokusesha ukuthi zingakubali lokhu. Imihlahlandlela ye-Google Webmaster kuzixhumanisi ukuqinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho lizuza ama-backlink ekhwalithi ephezulu, hhayi uhlelo lokuxhumanisa.
Ukubaluleka Kwezixhumanisi Ezingemuva Ebhizinisini
Ama-Backlinks yizici ezibalulekile zokukala injini yokusesha yakwa-Google. Ukwakhiwa kwe-Backlink kuyingxenye ebalulekile yokuthuthukisa injini yokusesha. Ngaphezu kwalokho, kuyindlela yokushayela ithrafikhi yezinto eziphilayo kuwebhusayithi yakho ngenjini yokusesha. Izinjini zokusesha ezifana ne-Google zisebenzisa izixhumanisi ukukhasa iwebhu. Ngenhlanganisela ye-SEO esekhasini, okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, isipiliyoni somsebenzisi esihle kakhulu, ukwakhiwa kwesixhumanisi kuzoba okusebenzayo kakhulu ekushayeleni ithrafikhi yemvelo.
Ikhwalithi yezixhumanisi, ukuhambisana, kanye negunya lesayithi isixhumanisi esikutholile kubaluleke kakhulu kunqubo yokwakha izixhumanisi. Uma ibhizinisi lakha izixhumanisi zekhwalithi ephezulu, lizoba nempumelelo yesikhathi eside emiphumeleni yosesho yemvelo.
Yakha Umkhiqizo - Kuzokwenza ngcono ukubonakala komkhiqizo wakho ku-inthanethi. Ama-backlink amahle athuthukisa ibhizinisi lakho, futhi kukhombisa ukuthi unegunya kulo mkhakha ngokusebenzisa izixhumanisi ezifanele kokuqukethwe.
Yakha ubuhlobo - Ngenkathi wenza izixhumanisi zokwakha, ibhizinisi lakho lizobe lifinyelela kwamanye amafemu, abagqugquzeli, ochwepheshe emkhakheni wemboni. Izodala ubudlelwano besikhathi eside phakathi kwezinkampani zombili ezizuzisa ngokufanayo.
Ithrafikhi yokudlulisela - Izixhumanisi ezinhle zithuthukisa ithrafikhi nezikhundla ku-SERP. Ngenxa yalokho, kuzothuthukisa ukuthengisa kwakho.
I-SEO yesigqoko esimhlophe ngokumelene ne-SEO yesigqoko Esimnyama
Inqubo yokwakha izixhumanisi inezindlela ezilungile nezingalungile zokwakha izixhumanisi kuwebhusayithi yakho. Nokho, amaqhinga okwakha izixhumanisi azosiza ekubonakaleni kwesikhathi eside nokusebenza kwesayithi. Ibhizinisi lakho lidinga ukulandela i- imihlahlandlela ye-webmaster ukwakha izixhumanisi zekhwalithi.
I-SEO yesigqoko esimhlophe iyindlela efanele yokwakha izixhumanisi zezinto eziphilayo. Izindlela zokwakha isixhumanisi esimhlophe se-SEO zingabandakanya okulandelayo
Isakhiwo Esiphukile Sakhiwo
I-Listicle Link Building
Ukwakha ukuhanjiswa kwe-Infographic
Ukuphawula kumabhulogi eziphathimandla
Ukwenza uhlu lwebhizinisi kanye nemibhalo yewebhusayithi
Izixhumanisi ezifihliwe, ukugxusha kwamagama angukhiye, Izinhlelo zokuxhumanisa izindlela ze-SEO yesigqoko esimnyama. Kuyindlela engalungile yokukala iwebhusayithi ezinjinini zokusesha. Kuzoholela ekujezisweni.
Indlela Yokuhlonza Izixhumanisi Zogaxekile noma Izixhumanisi Ezinobuthi
Izixhumanisi zogaxekile noma izixhumanisi ezinobuthi noma ama-backlink amabi, noma izixhumanisi ezingezona ezemvelo ezivela kuwebhusayithi yogaxekile. Lawa ma-backlinks ogaxekile azokwehlisa izinga lewebhusayithi yakho. Ngaphezu kwalokho, ama-backlink anobuthi anjalo akhombisa ezinjinini zokusesha (i-Google) ukuthi iwebhusayithi yakho ayinayo ikhwalithi noma okuqukethwe ukuze izitholele izixhumanisi ngokwayo.
Izixhumanisi ezinobuthi ziholela ezijezisweni ze-Google futhi zithinta ithrafikhi yewebhusayithi. Izixhumanisi ezibhekwa njengama-backlinks ogaxekile anamamethrikhi alandelayo we-SEO.
Umphumela wogaxekile ophezulu
Ikhasi elilodwa linezixhumanisi eziphumayo ezingu-100+
Isizinda esingakhonjiwe enjinini yokusesha
Igunya Lesizinda Esiphansi
Igunya Lekhasi Eliphansi
Ukugeleza Okuncane Kokwethenjwa
Ukugeleza kwezingcaphuno eziphansi
I-backlink yogaxekile ihlolwa ngosizo lwamathuluzi e-Backlinks afana I-Moz, Ahref, Mkhulu, Semrush, futhi nokuningi. Uma ubuyekeza i-backlink mathupha, uthola ama-backlinks avamile ogaxekile ukuze ubheke.
Ngithole noma yiziphi izixhumanisi zogaxekile ezivela esizindeni esijezisiwe
Xhumanisa kusuka kuzinkomba zezixhumanisi zogaxekile kanye nokuxhumanisa amapulazi
Thola futhi Ulawule Ogaxekile Bamazwana Ebhulogi
Ukuthola izixhumanisi kolunye ulimi noma amawebhusayithi angabalulekile
Inombolo enkulu yama-backlinks avela kumawebhusayithi angahlobene.
Izixhumanisi ezivela kumbhalo we-anchor olungiselelwe kakhulu
Ukuthola izixhumanisi kokuqukethwe okuyimpinda
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela (AI) KU-SEO
Ama-algorithms amaningi enjini yokusesha, okuhlanganisa i-Google Bert kanye ne-Rankbrain algorithm AI, abe yingxenye eyinhloko. I-AI yaba yingxenye ebalulekile yabantu, isibonelo, i-Alexa, i-Siri, i-Google Home. Izinkampani eziningi eziphezulu ezifana ne-Amazon, Google, Apple, imikhiqizo ye-Microsoft zisebenza ngemiyalo yezwi noma ukusesha ngezwi. Ngakho-ke i-AI idlala indima ebalulekile ekusebenziseni injini yokusesha.
Ngaphezu kwalokho, amathuluzi e-Artificial Intelligence (AI) adlala indima enkulu ekuhlaziyeni idatha. Isibonelo, kuyasiza ukuthola izihloko ezithrendayo ukuze uthole izikhala zokuqukethwe, uthuthukise imikhankaso yakho ekhona yokwakha izixhumanisi, njll.
Isoftware ye-AI ehlukene isetshenziswa ezigabeni ezahlukahlukene zenqubo yokwakha izixhumanisi. Lawa mathuluzi e-AI asiza enqubweni yokuqoqwa kwedatha, ukuhlonza amagama angukhiye afanelekile, ukuhlolwa kwewebhusayithi, ukunquma ukuhambisana kokuqukethwe kwewebhusayithi kanye nomklamo olungele i-SEO, ukuthola abathonya/ama-blogger, ukufinyelela komuntu siqu kwe-imeyili, nokunye.
Umhlahlandlela Wokuthola Ama-Backlink kanye Nezinga Ku-Google Usebenzisa i-AI
Khiqiza ama-Backlinks Nge-Guestographics Method
Eminyakeni embalwa edlule, okuqukethwe okushisekayo okune-punch ebonakalayo kusebenza kangcono ku-SEO. Ngokusho kwe- Ungavumeli ukutadisha, ukucinga i-infographics kukhuphuke kwafinyelela ku-800%. Ngaphezu kwalokho, u-65% wabantu ungabafundi ababonakalayo.
Lawa maqiniso akhombisa ukuthi i-Infographics iyithuluzi elihle lokumaketha lebhizinisi. I-Infographics ibalulekile ekwakheni izixhumanisi kanye nokumaketha okuqukethwe kwebhizinisi lakho. UBrain Dean ungumbungazi ovelele indlela yokwakha isixhumanisi se-guestographic. Zama, Indlela yokwakha isixhumanisi se-guestographic edume kakhulu yebhizinisi lakho, futhi iyindlela yokwakha isixhumanisi sesigqoko esimhlophe esingalawuleki.
Inqubo yokwakha isixhumanisi se-guestographic ihlanganisa izinyathelo ezinhlanu ezilandelayo.
Shicilela i-infographic yekhwalithi ephezulu kuwebhusayithi yakho.
Zitholele iwebhusayithi ebhala ngezihloko ezifanayo.
Yabelana nge-infographic yakho nabo.
Nikeza ngokuqukethwe okuhlukile kubo.
Thola ama-backlinks akho anomongo.
Ibhizinisi lakho lingasebenzisa BuzzSumo futhi I-Ninja Outreach ukuthola i-influencer ku-niche yakho ethile. Bese uklelisa abantu bese wenza ukuxhumana okuqondene nawe. Yenza amagama akho abe ngaphansi kwama-90.
Isampula Lokufinyelela Kwe-imeyili
Uma abantu sebephendule i-imeyili yakho yokuqala, nikeza mahhala Infographic futhi unikeze isingeniso esifushane esinamagama ayi-150- 300. Okulandelayo, buza ukuthi bazimisele yini ukwabelana nge-infographic yakho kuwebhusayithi yabo uma bevuma ukuthi ungathola i-backlink yokuqukethwe kwesayithi lakho. Leli qhinga elihle kakhulu lokwakha isixhumanisi ukwakha i-backlink yekhwalithi ephezulu evela ku-infographics.
Ithuluzi Lokusungula Elisekelwe Kubuhlakani Lokuthola Ithuba
Isici esibaluleke kakhulu se-SEO ukuthola amathuba afihliwe wezinga. Sibonga isoftware yobuhlakani bokwenziwa ye-SEO esiza ekukhuphuleni izinga lesayithi lakho. I-AI izonika amandla ukuqonda kwakho ocwaningweni lwamagama angukhiye ahlosiwe, imibono yesihloko, izikhala zokuqukethwe, amathuba okwakha izixhumanisi, ukwenza okuqukethwe okunamathrendi, nokuningi.
Ukuthola amathuba okuthuthukisa i-backlink ngesandla kudla isikhathi esiningi nokusebenza kanzima. Kodwa ngamathuluzi e-AI afana I-BrightEdge, I-MarketBrew, Vula i-AI, Ngingakwazi ukubeka, I-WordLift, I-Dialogflow, Alli AI, I-SE usezingeni, I-SmartWriter, I-Acrolinx, njll. Isiza ibhizinisi lakho ukuthi liveze amathuba ngokushesha futhi lithuthukise i-SEO yakho. Ngaphezu kwalokho, amathuluzi afana ne-Moz, Majestic, noma i-Ahrefs asiza ukuqonda i-backlink yakho ngezibalo. Ngakho-ke faka isoftware ye-AI kuqhinga lakho le-SEO futhi uthuthukise amazinga akho.
Thola Izixhumanisi Zekhwalithi Ku-Expert Roundups
Ama-athikili wokuqoqa ochwepheshe ayindlela enhle kakhulu yokukhiqiza izixhumanisi kokuqukethwe kwakho. Futhi ingelinye lamasu okuthengisa okuqukethwe. Ngaphezu kwalokho, lokhu okuthunyelwe kwe-Round-up kuyindlela enhle yokudalula izethameli zakho kochwepheshe embonini yakho futhi bathole imininingwane yabo ngesihloko esithile.
Okuthunyelwe okuphindaphindwayo okuqukethwe okuvela kochwepheshe bemboni ngesihloko esithile ukuze babelane ngemibono nemibono yabo. Isibonelo esihle kakhulu sokuqoqa uchwepheshe a Isihloko esihle kakhulu sokumaketha okuqukethwe.
Ungasebenzisa le ndlela elandelayo ukuze uthole isixhumanisi sokuqoqa amawebhusayithi.
Ibhizinisi lakho lingasebenzisa amathuluzi afana nalawa I-Ninja Outreach ukusheshisa ukuthola abathonya endaweni ethile futhi ufinyelele kubo ngama-imeyili aqondene nawe. Njengoba per I-Brian's Skyscraper Technique, ukuthumela ama-imeyili okufinyelela komuntu siqu kusiza ukuthola ama-backlink ekhwalithi.
I-Smartwriter AI isiza ukuthumela ama-imeyili omuntu siqu we-Hyper/ ama-imeyili aphihliza iqhwa. I-AI kusoftware izohlinzeka ngedatha yesikhathi sangempela noma imininingwane yawo wonke umthofu. Ngakho-ke unganikeza iphimbo eliyingqayizivele nochwepheshe abathuthukisa izinga lakho lempumelelo. Imijikelezo yochwepheshe inezinzuzo zesikhathi eside ezithile kuthrafikhi yewebhusayithi, Ukuthola ukugunyazwa, kanye nokuqashelwa kontanga.
Isu Lokwakha Isixhumanisi Esiphukile
Isakhiwo sokuxhumanisa esiphukile saziwa nangokuthi i-dead link building. Ukwakha ama-backlink esikhundleni sezixhumanisi kumakhasi we-404 ngesixhumanisi esisebenzayo kuwebhusayithi eqondiwe kuwumkhuba wokwakha ama-backlink. Ungasebenzisa i- i-ahrefs isihloli sesixhumanisi esiphukile ukuthola izixhumanisi eziphukile kuwebhusayithi.
Ngamanye amazwi, ithola iwebhusayithi egunyaziwe enesixhumanisi esiphukile esikhomba ikhasi lephutha le-404 futhi ihlinzeka ngolunye ucezu lokuqukethwe noma i-athikili. Kuyindlela ephumelela kakhulu yokwakha izixhumanisi eziqinile. Kuwukuwina kwakho kokubili umphathi wewebhu kanye nebhizinisi lakho. Umphathi wewebhusayithi angalungisa izixhumanisi zabo eziphukile ngokufaka esikhundleni sazo izixhumanisi ezinhle kakhulu ezivela kuwebhusayithi yakho.
I-SmartWriter ikusiza ukuthi wenze i-imeyili eqondene nawe kakhulu yeqhinga eliphukile lokwakha isixhumanisi. Njengomphumela, ibhizinisi lakho lingathola okuphindwe ka-2 ngaphezulu ama-backlink ane-ultra personalization ngokusebenzisa isoftware ye-AI. Ukwenza kube ngokwakho i-backlink ye-SmartWriter kuhlanganisa izici ezintathu.
In the Cela Ukushintsha Isixhumanisi Sokuqhudelana Naye isici, ithuluzi likucela ukuthi ugcwalise inkambu elandelayo. Uma usuwaqedile ngokuchofoza okukodwa kwenkinobho, ungakwazi ukukhiqiza ama-imeyili aqondene nawe kakhulu ukuze uxhumane ne-SkyScrapper Technique (Lokhu Kwazisa umamukeli mayelana namaphuzu abalulekile futhi kuchaza ukuthi kungani eyakho ingcono kunesixhumanisi esiqhudelana naye.)
Zuza Ama-Backlink Ekhwalithi Ngama-athikili angumhlahlandlela ocacile
Iziqondiso ezicacile zivame ukubizwa ngokuthi inqubo ye-skyscraper. Ukusebenzisa i-Skyscraper Technique kuyindlela engcono kakhulu yokwakha okuqukethwe nokuthuthukisa ama-backlink avela kumasayithi agunyaziwe. Izinjini zokusesha ziba ngcono uma iwebhusayithi yakho inokuqukethwe kwekhwalithi engcono. Siyabonga ku-RankBrain, I-Google EAT , Ama-algorithms we-Hummingbird.
Nazi izinyathelo ezintathu ezibalulekile zesu le-skyscraper:
Isinyathelo 1: Ukuthola okuqukethwe okufanele isixhumanisi
Isinyathelo sesi-2: Ukwenza okuqukethwe koqobo kube ngcono nakakhulu
Isinyathelo sesi-3: Ukufinyelela kubantu abalungile ukukhuthaza izixhumanisi nokwabelana
Sebenzisa isoftware ye-AI ukusiza inqubo yokudala okuqukethwe. Namuhla, cishe izigidigidi zamabhulogi aqukethwe ku-inthanethi, futhi cishe okuqukethwe okusha kwesigidi kwengezwa nsuku zonke. Ngenxa yalokho, imibuzo yosesho engaphezu kwezigidigidi ezingu-3.5 yenziwa nsuku zonke kusesho lwe-google.
Ukuletha okuqukethwe okuhlukile nokuphezulu kubaluleke kakhulu ebhizinisini, amathuluzi e-AI afana ne-BuzzSumo asiza ibhizinisi lakho ukuthi lithole izihloko ezihamba phambili. Ngokufanayo, sebenzisa amathuluzi e-AI afana ne-SmartWriter, Frase, Grammarly ukuthuthukisa okuqukethwe ngokuzenzakalelayo.
Ngokwesibonelo, Frase iyithuluzi elisekelwe ku-AI elisiza okuqukethwe kwakho ukuthi kuthuthuke ngokuzenzakalelayo ukuze useshe ngezwi. Isofthiwe ye-Grammarly ithola amaphutha e-typo, i-Plagiarism futhi iqinisekisa Ubungqayizivele bokuqukethwe. I-SmartWriter AI ikusiza ukuthi udale Isihloko Sebhulogi Esiyingqayizivele, Isingeniso Sebhulogi (Isingeniso esihehayo esingcono kakhulu sezithameli zakho), Uhlaka Lwebhulogi (Isebenza kangcono kakhulu “ngohlu” lwakho noma “ukwenziwa kanjani” ucezu lokuqukethwe), Nweba Isihloko Sebhulogi, njll. Ubuchwepheshe be-AI bungakusiza ukudala okuqukethwe okungcono kwe-SEO.
Tags: aiukufinyelela kwe-backlinkbacklinkoama-backlinksisigqoko esimnyama seoisakhiwo sesixhumanisi esiphukileuhlu lwamabhizinisibuzzsumoamazwanalandelaigunya lesizindaukufinyelela i-imeyilikhiqiza izixhumanisigoogle udleukubhalisa kwabavakashii-guestographyAma-algorithms we-hummingbirdukwakha isixhumanisiukuxuba ijusiukuxhumanai-listicle link buildingmozrankukutholakala kwe-ninjaakukho okulandelayoigunya lekhasirankbrainusezingenicela izixhumanisibambanxazonkeqoqa okuthunyelweinyokaumbhali ohlakaniphile aiizixhumanisi zogaxekileizixhumanisi ezinobuthiukugeleza kokuthembelaizinkomba zewebhusayithiisigqoko esimhlophe seo